LXQT 0.9.0: QT5 madio | Avy amin'ny Linux
Raha mipetraka ny fanantenana Xfce 4.12 navotsotra tsy ho ela, ny latabatra teraka tamin'ny firaisana teo anelanelan'ny LXDE sy Razor-Qt ny 0.9.0 version.
Ny fanovana lehibe dia ny fandaozana ny mifanentana amin'ny QT4, ary ny fitakiana QT 5.3 ho farafaharatsiny. Izy ireo koa dia manampy ho fiankinan-doha amin'ny singa sasany amin'ny rafitry ny KDE: KWindowSystem dia miditra fa tsy XFitMan ary nilaza izy ireo fa izany dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fifanarahana amin'ny Wayland, ary KGuiAddons dia lasa fiankinan-doha amin'ny lxqt-tontonana.
Misy ihany koa ny fiovana amin'ny lohahevitra, ny background ny tontonana dia azo alamina, ny menio lehibe dia azo ampiasaina amin'ny klavier ankehitriny, ary tsy amin'ny zavatra hafa. Ah, raha mampiasa QT 5.4 ianao, dia misy fihemorana sasany izay hovahana amin'ny kinova 5.4.1.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » LXQT 0.9.0: QT5 madio
Mpampiasa KDE aho, saingy vonona ny hifindra any LXQT. Tsy misy birao manintona ny saiko loatra, miandry fotsiny aho ny hisian'ny kinova miorina.
Tena tsara toa LXQT izany!
kntuzwow dia hoy izy:
Miorina amin'ny inona ny distro?
Mamaly an'i kntuzwow
Tsy distro io. Izy io dia tontolo iainana.
Tsy azon'i Claaaro> D
Santiago Murchio dia hoy izy:
LXQt toa tsara! Te hanandrana aho!
Valiny tamin'i Santiago Murchio